RASMI: Arsenal Oo Shaacisay Xiddiga Ku Guulaystay Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiican Kooxda Ee Ay Taageerayaashu Doorteen. – Wararka Ciyaaraha Maanta
Xilli ciyaareedka Arsenal ayaan wali si Rasmi ah u dhamaan maadama ay bartamaha todobaadka dambe ciyaari doonaan Finalka tartanka Europa League laakiin Gunners ayaa haatanba shaaca ka qaaday xiddiga ugu fiican kooxda xilli ciyaareedkan ee ay doorteen ama u codeeyeen taageerayaasha Gunners.
Xiddiga weerarka ka ciyaara ee Alexandre Lacazette ayaa ku guulaystay xiddiga ugu fiican Arsenal ee xilli ciyaareedkan kadib markii uu helay cod dhan 35% kuwaas oo ay siiyeen taageerayaasha.
Alexandre Lacazette ayaa soo bandhigay xilli ciyaareed cajiib ah isaga oo kooxdiisa u dhaliyay goolal badan iyo waliba caawin kana caawiyay in ay iska xaadiriyaan finalka Europa League xilli ciyaareedkan.
Alexandre Lacazette ayaa dhaliyay 18 gool xilli ciyaareedkan kuwaas oo waliba ahaa qaar muhiim u ah kana dhaliyay kooxaha Liverpool, Tottenham, Valencia iyo waliba chelsea iyo caawintii uu sameeyay kulankii Man United.
Kadib qaab ciyaareedkaas cajiibka ah taageerayaasha Arsenal ayaa weeraryahanka u doortay xiddigii ugu fiicnaa xilli ciyaareedka 2018/2019 kaas oo ahaa mid uu qaab ciyaareed cajiib ah ku riyaaqay.
Lacazette ayaa abaalmarinta ku garaacay xiddigo badan oo Arsenal ah oo uu ugu horeeyo xiddiga ku guulaystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalka premier League ee Pierre-Emerick Aubameyang.